Todobaadka Iyo Heesaha Bollywoodka Ugu Wanaagsan (+Video) – Filimside.net
Todobaadka Iyo Heesaha Bollywoodka Ugu Wanaagsan (+Video)
Waxaa lasoo bandhigay maqaalkii todobaad laha ahaa ee lagu soo bandhigaayey heesaha todobaadka ugu wanaagsan ee loogu daawashada badanyahay barta YouTube-ka kuwaaso Bollywood ah.
Waxaa in mudo ah hogaanka iska heesatay heeska caanka ah ee Dilbar kuna jirtay filmka Satyameva Jayate balse hader liiskan way ka baxday maadama laga xiiso dhacay waxaana liiska soo galeen heeso cusub.
Mere Naam Tu oo kujira Zero, Qaafirana oo kujirta Kedarnath iyo kuwa kale ayaa kamid noqdeen heesaha cusub ee sida weyn loo xiisenaayye maalamahan dambe ayadoo kuwii hore liiska laga saaray.
Kaalinta kowaad heeska Mere Naam Tu ee SRK filmkiisa Zero kujirtay balse hada waxaa kowaad gashay heeska Photo ee kujirta filmka Luka Chuppi, halka ay ku xigto Nai Lagda oo kujirta filmka Notebook iyo waliba Apna Time Aagya ee kujirta filmka Gully Boy.
Sido kale waxaa liiskan soo gashay heeska Coca-cola ee kujirta filmka Luka Chuppi ee tiyaatarada saaran waa mashruuc masraxa kucusub heeskan aad ayaa looga helay si weyn ayeena YouTube-ka kaga gadmeysa.
Fadlan halkaan hoose ka daawo heesaha todobaadka YouTube-ka laga jecelyahay ee Bollywoodka ah kuwaaso noqdeen heesaha loogu daawashada badan yahay ee Bollywoodka iska leeyihiin..
Photo from Luka Chuppi
Apna Time Aayega from Gully Boy